Umshini wokucoca ipali ye-gut gut telescopic
Ipali inokukunceda ufikelele kwimisele enzima ukuyicoca. Iindonga zethu zokucoca ziyahluka kwaye azikhawulelwanga ekucoceni. Guqula nje intloko yebrashi, sinokucoca ifestile ezingama-85 ngaphezulu komhlaba.
I-Plain 3K yeCarbon Fibre Tube yokuCoca umGudu
Sineemveliso zepali zokucoca i-gutter yemiphezulu eyahlukeneyo kwaye samkele ulwenziwo.
Ipali inokukunceda ukuba ufikelele kobona bunzima bokucoca i-gutter, ukusuka kwiiflethi ezincinci ukuya kumashishini amakhulu.
I-Fiberglass Gutter Vacuum 15ft Water Fed Window Ukucoca iPole
Iipali ze-fiberglass zilula ngokobunzima, zenza ukufakwa kube lula kwaye azizukutsala umbane okanye ziqhube umbane.
Ipali yokucoca i-gutter engama-30mm, iPole yokuCoca iiWindows
Imveliso yeepali zokucoca i-gutter yeedamitha ezahlukeneyo kwaye yamkela ukwenziwa ngokwezifiso.Ipali inokukunceda ukufikelela kobona bunzima bokucoca i-gutter, ukusuka kwiiflethi ezincinci ukuya kumashishini amakhulu. Sinokucoca i-gutter okanye uphahla ukuya kuthi ga kwi-85 yeenyawo ngaphezulu komgangatho womhlaba.
25Ft umjelo wokucoca ipali yefestile yokucoca isibonakude
Sineemveliso zepali zokucoca i-gutter zobude obahlukeneyo kwaye samkela ulwenziwo. Ipali inokukunceda ukuba ufikelele kobona bunzima bokucoca i-gutter, ukusuka kwiiflethi ezincinci ukuya kumashishini amakhulu.